सिताको जन्मदिनमा प्रचण्डको 'अग्नि परीक्षा' - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : २१ असार २०७७, आइतबार १० : ००
आजदेखि उनी ६५ वर्ष पूरा गरी ६६ वर्षमा प्रवेश गरेकी छिन्। छोरा प्रकाशको निधनपछि सिता विछिप्त छिन्। उनले केही वर्षअघि जेठी छोरी ज्ञानुलाई पनि गुमाएकी थिइन्। २ सन्तान वियोगको पीडामा डुबिरहेकी सीतालाई मनोवैज्ञानिक रुपमा उत्साहित राख्न प्रचण्ड र परिवारका सदस्यले प्रयास गरिरहेका छन् । पत्नी सिताको जन्मदिनको दिन प्रचण्ड राजनीतिक रुपमा गम्भीर मोडमा पुगेका छन् ।
तत्कालिन नेकपा एमालेसँग दुई वर्ष अघि पार्टी एकता गरेका प्रचण्ड यति बेला राजीनितिक रुपमा सक्रिय छन् ।
पछिल्लो केही दिन यता पार्टीमा विवाद देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच तनावको अवस्था देखिएको छ । पार्टी भित्रदेखिएको समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच आज निर्णायक वार्ता हुने तय भएको छ ।
प्रचण्डले आज ओलीसँगको वार्तामा कस्तो निर्णय गर्लान भन्ने धेरैको जनचासोको विषय बनेको छ। नेकपाको भविष्य उनले लिने निर्णयमाथी निर्भर छ। प्रचण्डलाई माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेकपाका शीर्ष नेताको समर्थन छ। नेकपाका शीर्ष नेताको समर्थनले बहुमतको नेता बन्न पुगेका प्रचण्ड ओलीलाई लगाम लगाउने र पार्टीलाई फुटबाट जोगाउने दुबै आकांक्षमा सफल होलान त ? सरप्राईज दिन माहिर राजनीतिक खेलाडी भएकाले नेकपा जनमा चमत्कारको आशा पलाएको छ।
आइतबार बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच वार्ताका लागि मिति तय गरेको छ। यो वार्ता पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनका लागि निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
दुई दिनदेखि स्थायी कमिटी बैठक रोकेर निकास खोज्ने प्रयास भए पनि सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवाद झनै चुलिएको छ। पटक पटक दुई अध्यक्षका लागि वार्ताको समयसीमा निर्धारण भएपनि सबै आ आफ्नै काममा व्यस्त भएका कारण शनिबार ३ पटकसम्म भेट्ने समय स्थगित भएको थियो।
यसै क्रममा शनिबार साँझ मन्त्रीहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई र राष्ट्रपतिलाई हुलहुज्जत गरेर निकाल्न खोजेको आरोप लगाउँदै सत्ता नछोड्ने अडान लिएका थिए। साथै उनले मन्त्रीहरुलाई अब कतातिर लाग्ने भनेर छुट्टाउन समय आएको पनि बताएका थिए।
तर उक्त अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै नेकपा प्रवत्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने प्रचार झुटो भएको बताएका छन्। उनले आफ्नो स्वार्थका लागि राष्ट्रपतिलाई विवादमा नतान्न पनि आग्रहण गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति आइरहेका बेला प्रचण्ड पक्षधरका नेताले ओलीसँग निर्णायक वार्ताका लागि प्रयास गरेका हुन्। उक्त छलफलमा सहमति नआए प्रधानमन्त्रीविरूद्ध स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने एक नेताले बताए। स्थायी कमिटीका ४४ सदस्यमध्ये कम्तिमा ३० जना प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छन्।
पार्टी विवादको चपेटामा संसद
नेकपामा विवाद तिब्र भन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री आलीले अचानक संसदको जारी अधिवेशन अन्त्य गर्ने घोषणा गरे । पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहाललाई झुक्याउँदै संसदको जारी अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए। सिफारिस पुगेको केहीबेरमै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिको सहारा लिएर ओलीले अचानक संसद् अधिवेसन अत्य गरेपछि नेकपा भित्रै त्यसको तिब्र विरोध भयो। विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने प्रयास गरेका कारण संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको अभिव्यक्ति दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्ध स्थायी कमिटीले गर्न सक्ने निर्णयविरुद्ध दबाब बढाउनका लागि यी सबै काम गरिरहेको पार्टीका नेता बताउँछन्।
कहाँबाट सुरु भयो विवाद ?
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफ्नो सरकार ढाल्न थालेको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको चौतर्फी बिरोध भएको थियो। उक्त अभिव्यक्तिपछि नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डसहित नेकपाका शीर्ष नेताले पार्टी र सरकारको नेतृत्वबाट ओलीलाई राजीनामा दिन भनेपछि नेकपामा विवाद चुलिएको हो।
दुबै पद नछाड्ने अडान लिदै आएका ओलीले आफूलाई कारबाही गरेमा पार्टी विभाजन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। पार्टीलाई जोड्वा वा तोड्ने भन्ने निर्णय अब प्रचण्डको हातमा निर्भर छ।